Enweghi ike ịchọta ya - Uru, Nchekwa akụ, Nchịkwa na Ụkpụrụ
Akwadoro nke Akaụntụ maka Nchedo Akụrụngwa
Ọtụtụ ndị ọkachamara na-echebe ndị ọkachamara kweere atụkwasị anya n'ụsọ oké osimiri na njiri aka ahọrọ ahọpụtara ihe nchebe kachasị ike n'ụwa dum. The Cook Islands Ekwenyesiri ike igosi onyinye kachasị mma nke nchebe iwu akụkọ. Ọ bụ ikike kacha mma maka nchekwa bara oke na echiche anyị. Ka anyị kwuo ụlọ ikpe mpaghara chọrọ ịkwụ ụgwọ. Buru n'uche, ụlọ ọrụ ntụkwasị obi dị na Cook Islands, nke dị na mpụga ikike ụlọ ikpe mpaghara gị. Yabụ, emeghị onye nrụnye (nke a na-ejikarị ụlọ ọrụ na-ahụ maka oke iwu) irube isi n'iwu ụlọ ikpe. N'ihi ya, onye ikikere, nke ejiri aka ya, onye anwụrụ 30 + afọ ụlọ ọrụ ntụkwasị obi eme ka akụ gị pụọ n'ụzọ ọjọọ. Maka onye udo na-ahụ maka udo otu ụlọ ọrụ dịpụrụ adịpụ nke ụlọ ọrụ (LLC) nke bụ 100% nwere ntụkwasị obi. The onye ahịa bụ onye njikwa nke Ụlọ ọrụ ahụ.
The A na - enwe akaụntụ na ụlọ ọrụ na - ahụ maka ụlọ akụ dị oke nchebe nke mba ụwa. Onye ahia ya bu aka na akaebe ego. Mgbe 'ihe ọjọọ' ahụ mere na ụlọ akụ nwere ike ibute ya. Yabụ, onye na-ahụ maka ọrụ nwere ike ịbanye na onye njikwa nke LLC. Nke ahụ bụ, ha na-eme ihe ị kwụrụ ụgwọ ụlọ ọrụ ntụkwasị obi iji mee - chekwaa akụ gị. Ozugbo ihe egwu dị na agabiga, a na-eweghachi onye ahịa ya ka ọ bụrụ onye njikwa nke LLC ebe akụ ka dị. Nchọpụta anyị egosirila na ntụkwasị obi Cook Islands a haziri nke ọma echekwabara akụ nke ndị ahịa na nsogbu ọ bụla gbasara iwu.
Offshore Trust vidiyo Omenala
An Nkwado ntụkwasị obi dị n'ụsọ oké osimiri dị nnọọ ka ntụkwasị obi ọdịnala. Ya mere, ọ nwere mmekọrịta ma ọ bụ nhazi n'etiti ndị na-eso: Ndị '' onye nkwado ',' 'Settlor (s'), '' onye enyemaka (ies). 'A na-eme ndokwa na akwụkwọ iwu siri ike. Anyị na-akpọ ya "Ememe ntụkwasị obi." Ngwaọrụ iwu a nwere ike ịnwe ikike maka akụ na ihe. Ọ nwere ike ijikwa akụ ndị ekwuru dị ka ọrụ ntụkwasị obi si dị. Na mgbakwunye, ọ nwere ike ịnye otu mmadụ uru ma kesara ya ma ọ bụ kesara ya. Ntụkwasị obi na-akọwapụta ndị a dị ka ndị na-erite uru. Nke a bụ ihe dị iche. Ka e were ya na ọkàikpe n’otu iwu chọrọ ka eweghara ego ahụ. Ma ọ dabara nke ọma na gị, onye na-ahụ maka ọrụ anyị (ụlọ ọrụ iwu anyị nọ n'ụsọ) na mpaghara ofesi abụghị iwu irube isi.
Onye nlekọta ya na / ma ọ bụ ụlọ ọrụ ntụkwasị obi nke enyere njikwa ntụkwasị obi ahụ. Ndi ji ọrụ kwesiri iji kwado nkwekọrịta a. Site na ịbịanye akwụkwọ a, ha kwenyere na iwu na ihe achọrọ nke ọrụ ntụkwasị obi edepụtara. Ntụkwasị obi adịghị ka ụlọ ọrụ ma ọ bụ ntọala. Ofdị ntụkwasị obi a bụ nkwekọrịta edere ede. Ọ na-akọwapụta na onye nlekọta ahụ bụ iji nye ndị ga-erite uru ma chebe akụ sitere na ndị na-eri anụ.
Kpebie iguzobe Nchedo Onyinye Mpụga nke Oke
Nke mbu, onye biri ulo nkpebi emeela mkpebi nke ikpata ntụkwasị obi ahu. Mgbe ahụ, onye ọbịa ga-ahọrọ ụdị ntụkwasị obi ọchọrọ. Nke a gụnyere oge ya, nke nwere ike ịdịru mgbe ebighi ebi. Onye bi ebe ahụ ga-ejikwa mkpebi dị mkpa kọwaa nkọwapụta. Nkọwa ndị a gụnyere ikpebi ma enwere ike iwepu ntụkwasị obi ahụ ma ọ bụ na ịnweghị. Ha gụnyere ma ntụkwasị obi ahụ ga-abụ ụkọ ma ọ bụ na ọ gaghị. Ọzọkwa, ọ ga-akọwapụta ikike, ọrụ, ọrụ, na atụmanya nke troro ahụ.
Ugbu a, ka anyị lelee echiche ntụkwasị obi tụgharịrị ma ọ bụ nke a na-apụghị ịgbagha agbagha. Dịka aha ha siri gosi, enwere ike iwepu ntụkwasị obi enwere ike iwepụ oge ọ bụla yana usoro maka onye ndozi edepụtara. N'aka nke ọzọ, ha nwere ike ịnwe oge ndụ ha kara aka (ma ọ bụ nwee ike ịdịteghị aka) na enweghị nkwado maka iweghachite ya. Nke ahụ bụ, ọ nwere ike ma ọ bụ mebie ya dabere na usoro nke okike ya dịka akọwapụtara na ọrụ ntụkwasị obi.
N’aka nke ozo, ntụkwasị obi nke uche nwere ike idabaa n’otu udi, a na akowa ya dika ntukwasi obi nke nwere ike ime ka odi n ’oru ka onye na eme ihe n’enye onye n’eme ihe n’enye ndi ozo, ma n’enye n’enye ufodu, onye nwepuru ikike inwe nhọputa ma obu gbakwunye ndi oma. Nke a hapụrụ ọtụtụ ikike karịa atụkwasị anya n'ụsọ oké osimiri nye onye nlekọta ya, ka osila dị, ma gosipụta mkpa ọ dị nlezianya ịhọrọ onye tozuru etozu ma ọ bụ ntụkwasị obi nwere ụlọ ọrụ nwere aha ọma, ezigbo aha, na ahụmịhe dị mkpa iji wee nwee ọfụma ma jiri ntụkwasị obi mezuo usoro nke ntụkwasị obi ahụ. .
Uru nke Ụlọ ọrụ Offshore
Ịtụkwasị ihe onwunwe na aha na ihe onwunwe dị na ntụkwasị obi bụ ebe ọdụm ọdụ nke nzuzo na nchebe site na ụgwọ nke uru nke ndị na-atụkwasị anya na mba ndị ọzọ. Ọ bụ ezie na aha iwu ahụ na-aga na ndị na-elekọta ụlọ, nke ga-arụrịrịrịrịrịrịrịrịrịrị ọrụ e nyere na ntụkwasị obi ahụ. Ebumnuche nke ntụkwasị obi bụ inye ndị ga-enweta uru, nke onye nhazi ahụ nwere ike ịbụ, na mgbe mgbe, onye edere aha. Ndị a na-abara uru, nwere ikike dị ike maka ihe gbasara ntụrụndụ na ọtụtụ ikpe mara na Ebumnuche bụ ịnye uru, dị ka akọwapụtara na akwụkwọ nkwekọrịta, maka ndị a ga-enweta uru na chịkwaa mma na nduzi ha mgbe ajụjụ maka njikwa nke ntụkwasị obi ahụ bilitere.
Maka na ndị a tụkwasịrị obi n'ụsọ oké osimiri na-enwekarị mgbe a na-ahụ ha na ụtụ isi ma ọ bụ ikike nchedo akụ na ụba ezi aha maka ichedo akụ na ụba na nzuzo, ntụkwasị obi ndị dịpụrụ adịpụ na-eritekwa uru site na njirimara ndị a. Akụrụngwa ejiri jikwaa tụkwasịrị obi n'ụsọ oké osimiri bụ nke kachasị enwere onwe ya site na mgbe ụfọdụ ị na-amanye ibu arọ nke dị na ebe obibi ma ọ bụ ikike. Ọ bụrụ na etinyere ntụkwasị obi ahụ iji mee ndokwa maka abamuru nke onye guzobere ntụkwasị obi na / ma ọ bụ ndị di na nwunye, ụmụ ma ọ bụ ndị nketa ndị ọzọ nke onye edozi, dịka ọmụmaatụ, atụkwasị obi ndị dịpụrụ adịpụ nwere ike ị nweta ebe nchekwa site na nyocha dị oke egwu. Maka ndị US, ntụkwasị obi nchebe nke oke osimiri bụ nke na-anọpụ iche na ụtụ isi. Nke a, ọ naghị a belata ma ọ bụ wedata ụtụ isi gị.
Ọzọkwa, dabere na nhazi ha na nchebe akụ na ụba na-echekwa nchebe dị mma, ndị na-atụkwasị obi n'ụsọ oké osimiri na-enye enweghị nchebe na-enweghị atụ, nchebe dị ukwuu site n'ihe ize ndụ nke ịgba akwụkwọ gbasara iwu obodo, na ọbụna site na ihe ndị dị ka ịgba alụkwaghịm ma ọ bụ ịzụ ahịa achụmnta ego. Ọtụtụ ndị na-ejikwa ha maka nchedo akụ na ụba na ọnọdụ nke ikike nke ụlọ ma ọ bụ ọgba aghara akụ na ụba. Ọ siri nnọọ ike, ma ọ bụrụ na ebubo ebubo nke mmebi iwu dị egwu, ka otu onye na-apụ apụ na-atụba ihe nchebe nzuzo na-enweghị atụ n'ọtụtụ iwu.
Ebee ka Mpeepe Akaụntụ
A na-etinyere ihe ndị dị n'ụsọ oke na ụtụ dị ala ma ọ bụ ebe nchekwa nchekwa nwere aha ọma maka njikwa na-aga nke ọma na igbu nke ntụkwasị obi na ego ntụkwasị obi. Agbanyeghị, ọ dịchaghị mkpa ebe dị mma ịbụ ebe a na-atụ ụtụ ma ọ bụ nwee iwu lax - ọtụtụ n'ime ikike ntụkwasị obi na-aga nke ọma na mba na-enyekarị ndị ama ama, ụlọ ọrụ ntụkwasị obi nwere ọfụma na nnukwu ihe nzuzo.
Otu ihe ekwenye n’echiche bụ na ikike ndị a na-ehiwe iwu ntụkwasị obi ha na ụkpụrụ ha n’ebe iwu Bekee siri dị — nke a n’ihi na echiche ebulite ntụkwasị obi bụ echiche Bekee ochie nke malitere n’oge Ọgbọ agha. Iwu ndị ọzọ dị na Europe nke na-enye nchịkwa ntụkwasị obi na-aga nke ọma, dị ka Luxembourg, Malta, Switzerland, wdg, emeela iwu na ụkpụrụ ha iji kwekọọ n'ụkpụrụ nchịkwa ntụkwasị obi kwesịrị ekwesị nke ndị ahụ dabere na iwu ndị Bekee. Usoro ndị na-adabere n'elu ndị ọzọ na-ekwu banyere nchedo ego bụ Cook Islands, nke Nevis tụkwasịrị obi na nke dị na Belize, n'usoro ahụ.
Ịmepụta ịtụkwasị obi n'ụsọ oké osimiri chọrọ nlezianya dị nyocha nke ihe mgbaru ọsọ na ebumnuche nke nkwụnye ihe edozi, ọ ga-ewepụkwa ụfọdụ ihe onwunwe na ntọala ya na mmezi ya. Ya mere, nnyocha siri ike, nke a mere, na ndụmọdụ na enyemaka site na ndị ọrụ ahụmahụ na ndị maara ihe bụ ihe dị mkpa.
Ịmepụta ntụkwasị obi dịpụrụ adịpụ na-enye nchebe dị ukwuu maka akụ site na nyocha, nyocha, na esemokwu obodo. O doro anya na ọ bụ ezie na ọnụahịa nke nhazi na nlekọta nwere ike ịtụle, nhazi nke ntụkwasị obi ndị dị n'ụsọ oké osimiri ga-enye ndị na-achọ ka ha chebe akụ ha bara ụba ma ọ bụ nye ụmụ ha ogologo oge.